म्यूजिक भिडियो Archives - Wnepal.com
अमेरिकामा बसेर नेपाली सुगम संगीतमा लागिपरेका युवा संगीतकार तथा गीतकार उमेश रेग्मीले आफ्नो नयाँ क्रिएशन चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र चर्चित गायिका मेलिना राईको स्वरमा ल्याएका छन्। आफ्नो गृहनगर सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवा तथा यसको आसपासका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरुको वर्णनसँगै माया–प्रेमका भावना व्यक्त गरिएको गीत सदरमुकाम इनरुवाको पर्यटकीय प्रवर्धन गर्ने उदेश्यका साथ रेकर्ड गरी […]
गायक तथा कुशल संगीतकार हरि लम्सालले ‘यो शिर झुकेको छैन’ गजल सार्वजनिक गरेका छन् । कपिल अन्जानको शब्दरचना र हरि लम्सालको कर्णप्रिय संगीत तथा स्वर रहेको गीतमा देशप्रेमले ओतप्रोत स्वाभिमानी नेपालीको भावना उजागर गरिएको छ । टुवेल नोट्सको अफिसियल च्यानलबाट शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको गीतको भिडियोमा शंकर पराजुली र आस्था बस्नेतको जिवन्त अभिनय रहेको छ । […]
नेपाल आइडल सिजन २ का विजेता रवी ओड र गायिका स्मिता दाहालको आवाजमा रहेको ‘राजा रानी’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शब्द भिम विसीको तथा संगीत र रिकेश गुरुङ्गको एरेन्ज गीतमा रहेको छ । भिडियोमा कविता श्रेष्ठ, रवी ओड , प्रियङ्गका सिबाकोटी र दिनेश विष्टको अभिनय रहेको छ । टिपिकल शब्द संयोजनमा […]
कोराना कहरबाट सिर्जना भएको अफटयारो परिस्थितिलाई समेटेर तयार पारिएको गीतकार प्रमिला बस्नेतको जनचेतनामुलक गीत “सेवा गरौ“ सार्वजनिक भएको छ । रोगको कारणबाट अफटयारो अवस्थामा भएका मानिसको पिर र व्यथालाई गीतमा समेटिएको छ । सार्वजनिक गीतमा गायक पदम राई , ज्ञानु ज्ञान्मी , सुष्मा लिम्बु र संगीता रानपहेलीको स्वर रहेको छ । प्यारो देश नेपाल अनि […]
सुमधुर आवाजका धनि गायक दिपक पाठक र चर्चित गायिका रचना रिमालको स्वरमा नयाँ गित “दिलकी रानी” को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ। जसमा र्यापर जेम्स बिश्वकर्माको र्याप रहेको छ। डि सिरिज युट्युब च्यानल मार्फत सार्बनिक गरिएको “दिलकी रानी” अहिले चर्चामा रहेको छ। दिपक पाठकको शब्द तथा संगीत रहेको गीतलाई विश्व अधिकारिले म्युजिक एरेन्ज गरेका हुन् […]
साहित्य सरोवर मिडिया प्रालीको प्रस्तुतीमा राष्ट्रप्रेमले भरिपुर्ण मौलिक गीत “नेपाली माटो “सार्वजनिक भएको छ । प्रवासी भुमीमा रहने आम नेपालीहरुले देश प्रति देखाउने मायालाई गीतमा समेटिएको छ । प्रवासमा रहेर पनी नेपाली साहित्य साथै समाजसेवामा सक्रिय रहनुभएका मोहन कृष्ण होमागाईँको शब्द तथा डि आर अटुको संगीत गीतमा रहेको छ । देशको माटो गीतमा द भ्वाइसका […]
गायक प्रताप दास र गायिका अनु चौधरीको स्वरमा रहेको ‘माया ‘ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रेम र रोमान्सलाई गीतमा समावेश गरिएको छ । प्रेम र समपर्णलाई समेटिएको कारणले आम दर्शक तथा स्रोताको मनमा गीत बस्न सफल हुनेमा आशावादी रहेको गीतका प्रस्तुत कर्ता मनोज कार्कीले बताए । गोविन्द कुईकेलको शब्द तथा डिवि लामाको सगीत […]
मातातिर्थ औंसीको अबसर पारेर विश्व किर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायले आफ्नो नयाँ गीत ‘आमा’को भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । गीत संगीतमै ५२ वटा विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल यी पहिलो नेपाली गीतकार यो गीतबाट पनि हालै विश्व रेकर्ड बनाएका थिए । यो गीतमा सबै भन्दा बढी पटक आमा शब्दको प्रयोग गरिएको छ । यही प्रयोगका […]
नयाँ गीत ‘यो जिन्दगीको‘ बजारमा
चर्चित गायक तथा संगीतकार शंकर थापा स्माइलको नयाँ गीत “हे मन” सार्वजनिक भएको छ । गायक स्माइलका यस अघि पनि थुप्रै हिट गितहरु बजारमा आएका छन् । उनले हालसम्म सांगीतिक क्षेत्रमा विभिन्न स्वरुपमा आफ्ना गीतहरु दर्शक तथा स्रोताका माझ पस्कदै आएका छन् । फल स्वरुप सांगीतिक क्षेत्रमा उनले आफ्नो बेग्लै परिचय बनाउन सफल भएका छन् […]
गायक रामकृष्ण ढकालको स्वरमा रहेको उकालीको त्यो पल्लो डाडाँ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा खोटाङको रावा बेशी गाउँ पालिकाको वडा न. १ मा पर्ने कुभिण्डेको रमणिय दृश्यहरुलाई कैद गर्दै माओवादी द्वन्दकालको घटनालाई चित्रण गरिएको छ । गीतकार साजन श्रेष्ठको शब्द, अशोक थापाको संगीत रहेको उक्त गीतमा कलाकार मोहन चाम्लिङ, कनन खालिङ, शीला गजुरेल, […]
गायकिा मेलिना राई र अनिल गजमेरको आवजमा ‘मेरो जीवनको चाहना’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । रबिन टोटोको शब्दमा मनरथ कालीकोटेको संगीत रहेको छ भने रेकर्डिस्ट दिप घतानी रहेको गीतलाइ टंक लिम्बू रोमीले एरेञ्ज गरेका हुन । केशब भट्टराई र तेजश्विनी बाँस्कोटाको अभिनय रहेको ‘मेरो जीवनको चाहना’ गीतको भिडियोमा सोम मग्रातीको श्रृंगार, सागर पौडेलको छाँयाकनमा […]
गायिका दिपा लामा र गायक सुमन केसीको युगल गायनमा रहेको बिल्कुलै नयाँ गीत ‘फिदा’ सार्वजनिक भएको छ। लोकलयमा आधारित यस गीतलाई गीतकार सुमन योञ्जनले लेखेका हुन्। दिपक शर्माले संगीतवद्द गरेको यस गीतमा साहस शाक्यको संगीत संयोजन रहेको छ। पल शाह र वर्षा राउत म्युजिक भिडियोमा फिचर्ड छन्। सुबोल थापाले कोरियोग्राफी गरेको यस भिडियोलाई नवराज उप्रेतीले […]
युट्युबबाट चर्चा बटुल्दै रुकमानको ‘धेरै माया गर्छु’ भिडियोले
पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका मेलिना राई र मोडल तथा गायक रुकमान लिम्बूको स्वरमा ‘धेरै माया गर्छु’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियोमा आफूलाई मनपर्ने प्रेमिकाप्रति कतिसम्म समर्पित गर्न सकिन्छ भन्ने भाव चित्रण गरिएको छ । हङकङको समुद्री तट तथा विभिन्न रमणीय स्थलहरुमा छायाँकन गरिएको यो भिडियो रुबुशा क्रियशनको अफिसियल यु–ट्युब च्यानल ‘रुबुशा च्यानल’मार्फत […]
गायक प्रताप दासको स्वर, राज केसीको शब्द र जीवन रसाइलीको संगीतमा रहेको ‘खुशी’ बोलको म्युजिक भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको यस गीतमा राहुल प्रधानको संगीत संयोजन रहेको छ। अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरमा रहर आफ्नो कलाकारिता यात्रालाई अघि बढाइरहेका गीतकार तथा मोडेल राज केसीको साथमा अस्ट्रलियन मोडेल एबि म्युजिक भिडियोमा फिचर्ड छन्। म्युजिक भिडियोमा […]
आयुषको स्वर, संगीतमा ‘निर्दोष माया’ सार्वजनिक ( भिडियो )
प्रतिभाशाली गायक आयुष खतिवडाको रक भर्सनमा आधारित गीत ‘निर्दोष माया’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यस गीतमा शब्द गायक खतिवडाका बुवा विकल खतिवडाको रहेको छ। गीतमा स्वयम् गायक खतिवडाको संगीत र संगीत संयोजन रहेको छ। १४ वर्षीय गायक खतिवडा गितार, किवोर्ड लगायतका वाजा बजाउन सक्छन्। उनले ट्रीनिटी कलेज अफ लन्डन बाट म्युजिक अध्ययन समेत गरेका […]
चर्चित गीत म भन्दा निको सफलतापछि तिमी बिना बांच्दिन म भन्ने तिमी (म भन्दा नि २) केहि समयअघि सार्वजनिक भयो । जसको पहिलो अनि दोश्रो भागलाई नै गाएकी थिइन् अहिलेकी चर्चित अनि सुमधुर स्वरकी धनि मेलिना राईले । अफिसियल भिडियो विनानै सार्वजनिक गरिएको म भन्दा निको पहिलो गीतलाई युट्युबको अफिसियल च्यानलमा एक करोड ४५ लाख […]
यतिबेला नेपाली सांगीतिक बजार तातीएको छ, न तातियोस पनि किन जहाँ जहिले जुन बेला पनि जे सुकै हुन सक्ने बजार न हो! गीत संगीत भन्ने बितिकै जस्तोलाई पनि सहज मनोरंजन दिन र लिन सक्ने उपयुक्त औषधि भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली सांगीतिक बजारमा दिन प्रतिदिन नयाँ गीत भित्रिने क्रम बढ्दो छ । यस्तैमा जिबनमा कसैलाई […]
गायक सिडी बिजय अधिकारी र गायिका प्रविशा अधिकारीको भ्यालेन्टाइन विशेष ‘दुरी मजबुरी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । एनेक्समक्स म्युजिक नामक म्युजिक प्रोडक्सन टिमद्धरा सिर्जित बिश्वभरीनै चर्चित ट्युनमा म्युजिक भिडियो ‘दुरी मजबुरी’ रिलिज भएको हो । टिकटक, भ्ल्ग, युट्युब लगायत थुप्रै स्थानमा पहिलेनै निक्कै चर्चा कमाइसकेको ट्युनमा गायक सिडी बिजय अधिकारीले शब्द तथा संगीत सिर्जना […]
‘इस’ बोलको गीत बलिउडको चर्चित म्युुजिक कम्पनीले हिन्दी भर्सनमा निकाल्ने भएको छ । यस गीतका गायक, संगीतकार तथा गीतकार रहेका सम्राट चौलागाईले इन्डियाको चर्चित म्युजिक कम्पनीले आफ्नो गीत हिन्दी भर्सनमा निकाल्ने कुरा बताएका हन् । सो म्युजिक कम्पनीको नाम केहि दिनमा सार्वजनिक गर्नेपनि सम्राटले बताए । हिन्दी भर्सनमा बन्न लागेको गीतमा सम्राटकै स्वर रहनेछ, तर […]